လင်းတ (အင်္ဂလိပ်: Vulture) ဆိုသည်မှာ ငှက်အကြီးစားများ ဖြစ်ကြပြီး သတ္တဝါအသေကောင်များ၊ သေခါနီးဆဲဆဲ သတ္တဝါများကို စားသုံးကြသည်။ လင်းတများသည် သူတို့၏ ကြီးမားသော တောင်ပံများကို ခတ်ရန် မလိုအပ်ပဲ လေထဲတွင် မိုင်ပေါင်းများစွာ လေဟုန်စီး နိုင်ကြသည်။ လင်းတသည် အေးမြစေရန် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေးပေါက်ကြသည်။
↑ Fossilworks:Aegypiinae။ Fossilworks။ 28 June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Temperature Regulation in Turkey Vultures" (1988). The Condor 90 (4): 913–919. doi:10.2307/1368848.
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် လင်းတ ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လင်းတ&oldid=727452" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။